Sniper Strike – FPS 3D Shooting Game 3.703 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.703 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
ဂိမ္းမ်ား အက္ရွင္ Sniper Strike – FPS 3D Shooting Game
Sniper Strike – FPS 3D Shooting Game ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
intercept, ပပျောက်ခြင်းနှင့် extract လုပ်ပါ။ ဒါဟာရန်သူထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့အချိန်ပဲ!
Sniper Strike သုံးဂိမ်းသည် Modes နှင့်မစ်ရှင်ရာပေါင်းများစွာကိုဖြတ်ပြီးစစ်တိုက်၌သငျတှငျးတဲ့ High-ကထုတ်တဲ့စနိုက်ပါအတွေ့အကြုံကိုဖြစ်ပါတယ်။ မိုဘိုင်းအပေါ်ဘယ်တော့မှမတိုင်မီကဲ့သို့သော AAA rated စနိုက်ပါဂိမ်းခံစားရသည်။
Wolf ကဂျက်ဆင်နှင့် Strike Force ၏ကျန်နှင့်အတူရေးအဖွဲ့တက်သင်ရန်လိုမုန်းတီးမှုပစ်မှတ်ထားနှင့်မကောင်းသောအ Elite အမိန့်ချယူသည်။ အွန်လိုင်းတိုက်ခိုက်ရေးအတွက်သူငယ်ချင်းများနှင့်ဦးခေါင်းမှဦးခေါင်း သွား. ဦးဆောင်၏အပေါ်ဆုံးမှရိုက်ကူး။
● Elite တပ်မှူးများနှင့်စိတ်ကျေနပ်စရာ, kill ရိုက်ချက်များနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ henchmen ထွက် Wipe!
●လုပ်ပြီး Buddy တက်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ရေးအဖွဲ့နှင့်ကယ်ဆယ်ရေးဓားစာခံကိုဖုံးလွှမ်းရန်မဟာမိတ်များနှင့်အတူ။
●အွန်လိုင်းမိတ်ဆွေများကို (နှင့်ရန်သူများ) ထွက်ရှာခြင်းနှင့်စနိုက်ပါ duels LIVE သူတို့ကိုစိန်ခေါ်!
●မစ်ရှင်တပ်များနှင့်, Elite အမိန့်နှင့်အတူအန္တိမထိပ်တိုက်တွေ့ဘို့ပြင်ဆင်ထားရန် Clan ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတပ်ဖွဲ့များ Join ။
●ပိုငျသညျအနိုင်ရ, ပိုကောင်းသငျသညျ play - upgrade နှင့်ဦးဆောင်ဖွင့်ပျံသင်ပို့မညျဖွစျကွောငျးခက်, ပိုမိုမြန်ဆန်စိန်ခေါ်မှုများအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံ!
သငျသညျဖောက်ဖျက်အထူးကု Wolf ကအတူဓားစာခံကယ်တင်, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ PvP စနိုက်ပါ duels အတွက်စေ့စပ်, ဒါမှမဟုတ်နယ်ပယ်တွင် mode မှာရပ်နေသည်ကိုနောက်ဆုံးလူကိုဖြစ်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်, ဤသူသည်သင်တို့ကိုလက်လွတ်ချင်ကြဘူးတမော်ကွန်း FPS အတွေ့အကြုံကိုပါ!
Sniper Strike – FPS 3D Shooting Game အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Sniper Strike – FPS 3D Shooting Game အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Sniper Strike – FPS 3D Shooting Game အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
apk-4-free စတိုး 327.89k 87.78M
Sniper Strike – FPS 3D Shooting Game ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Sniper Strike – FPS 3D Shooting Game အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 3.703
ထုတ်လုပ်သူ Mobile Gaming Studios Ltd.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.eightpixelssquare.com/gdpr/v0002-pcp.html
App Name: Sniper Strike – FPS 3D Shooting Game
File Size: 134.46MB
Release date: 2018-12-16 07:48:14
လက်မှတ် SHA1: CD:3E:60:E9:4E:24:B4:D1:E0:A7:3A:2D:4D:31:53:0E:44:6D:D8:5F
အဖွဲ့အစည်း (O): Mobile Gaming Studios Ltd.
Sniper Strike – FPS 3D Shooting Game APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ